"Costa Waa Sida Nin Waalan, Xayawaan Ah Marka Garoonka Lagu Jiro, Dagaalkana Jecel," – Xidig Caan Ah Ayaa Yiri %
Weerar yahanka Atletico Madrid ee Griezmann ayaa wuxuu si layaab leh uu amaan dusha uga tuuray laacibka ay isku kooxda yihiin ee Diego Costa, kaasoo uu ku tilmaamay inuu yahay xayawaan muranka ama dagaalka jecel, marka garoonka lagu jiro.
Costa oo fasal ciyaareedkan dib ugu soo laabtay kooxda ka dhisan caasimada dalka Spain, ayaa wuxuu hadda la joogaa Final-ka Europa League, kaasoo ay la balansan yihiin caawa oo Arbaco ah dhigooda Marsille oo ka dhisan dalka Faransiiska.
Isagoo wareysi siinayay Website-ka xiriirka kubada cagta Yurub ee UEFA ayaa wuxuu cod dheer ku sheegay Griezmann in wiilka reer Spain ee Diego Costa uu si fiican udheelayo marka uu muran badan iyo dood garoonka kula kulmo.
Griezmann ayaa wuxuu kaloo ku nuux-nuux saday in saaxibkiisa ay wada shaqeyn fiican leeyihiin marka ay garoonka kuwada jiraan, islamarkaana mar walba uu caawimaad badan oo lasoo koobi Karin uu ka helo Boqor Costa.
“Isaga waa mid aad I difaaca aniga,” ayuu yiri Griezmann.
“Isaga wuxuu igaaga abuuraa boosas badan, inta udhaxeysa khadka dhexe iyo daafaca ee kooxda naga soo horjeeda.
“Oradkiisa iyo sida aan u ogahay meesha uu Banooniga dhigayo ayaa waxay yihiin kuwa isaga wax badan iga saacida aniga.
“Waqti walba ma iskula joogno si wada jir ah, laakiin isku xirkeena ayaa wuxuu yahay mid aad u wanaagsan,” ayuu sii daba dhigay.
“Isaga waa sida xayawaanka oo kale, marka garoonka lagu jiro, wuxuna jecel yahay muranka ama dagaalka,” ayuu ku daray hadalkiisa.
“Marka ii si wayn u dagaalamayo, ayuu si fiican udheelaa isaga.
“Isaga waa mid wax badan qunyar socod ah, hadana cadaadis badan, laakiin waa sida nin waalan oo kale marka qolka labiska lagu jiro, mar walba waa mid kaftan badan, wuxuu ku cayaarayaa waxyaabo xun, oo uu ku sameeyo shaqaalaha,” ayuu kusoo xiray hadalkiisa.